တရုတ်နိုင်ငံမှ ဖုန်စုပ်စက် အလှကုန်များအတွက် Homogenizer|Homogenizer Mixer ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |ZhiTong
ဖုန်စုပ်စက် အလှကုန်အတွက် Homogenizer|Homogenizer Mixer
1. Siemens တို့ထိ PLC လည်ပတ်မှုစနစ်
8. ပမာဏ 100 လီတာ မှ 500 လီတာအထိ
1. Working capacity 50L မှ 500L အထိ;
2.အလှကုန်များအတွက် Homogenizerမြင့်မားသော viscosity 10,000~180,000cps viscosity;
3.အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပလည်ပတ်မှုစနစ်သည် အကောင်းဆုံးရောစပ်ထိရောက်မှုဖြစ်စေသည်။
4.System ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် GMP စံနှုန်းဖြင့် ရောက်ရှိသည်။
6. Lifting emulsifier ၊ emulsifying pot ၊ operating platform ၊ oil and water pot ၊ oil and water pot နှင့် controller အပါအဝင်၊
7.အလှကုန်များအတွက် Homogenizeremulsifying pot၊ emulsifying pot rack နှင့် emulsifying pot cover fixed plate၊ emulsifying pot တွင် ရောစပ်ထားသော ယန္တရား၊ အမှိုက်ပစ်ခြင်း၊ အအေးလည်ပတ်မှု ယန္တရား၊
8. အတွင်းနှင့်ပြင်ပ လည်ပတ်မှုစနစ်သည် အကောင်းဆုံးရောစပ်မှုကို ထိရောက်မှုဖြစ်စေသည်။စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် GMP စံနှုန်းဖြင့် ရောက်ရှိသည်။
9. အလှကုန်များအတွက် Homogenizerပိုက်တည်ဆောက်မှုပုံစံ မှန်ပြတင်းပေါက်နှင့် မော်နီတာပစ္စည်း လည်ပတ်မှု။
SS304.SS316 ကို အကောင်းဆုံး Corrosion ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။မြင့်မားသောအပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည်။
10. တစ်သားတည်းဖြစ်နေသော မွှေခြင်းနှင့် လှော်တက်မွှေခြင်းကို သီးခြား သို့မဟုတ် တစ်ချိန်တည်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ပစ္စည်း granulation၊ emulsification၊ ယူနီဖောင်းရောစပ်ခြင်း၊ dispersion စသည်တို့ကို အချိန်တိုအတွင်း ပြီးမြောက်နိုင်ပါသည်။
11. အအေးခံရေသည် ပစ္စည်းကို အေးစေရန် ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။အလှကုန်များအတွက် Homogenizer mezzanin အပြင်ဘက်တွင် လျှပ်ကာအလွှာဖြင့် လုပ်ဆောင်မှု အဆင်ပြေပြီး ရိုးရှင်းပါသည်။
၁၂။အလှကုန်များအတွက် Homogenizerလျှပ်စစ်အပူပေးသည့် စီးရီးလေဟာနယ် emulsifying mixer နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စက်ဝန်းအချိန်ပိုတိုပါသည်။
13. စနစ်အပြည့်အစုံတွင် ရောနှောခြင်း၊ ကွဲလွဲခြင်း၊ emulsifying၊ တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ လေဟာနယ်၊ အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်းတို့ကို ယူနစ်တစ်ခုစီတွင် တစ်ဦးချင်းလုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါရှိသည်။
14. Homogenizing မော်တာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံမှာ အအေးခံစနစ်ပါရှိပြီး သက်တမ်းပိုကြာပါတယ်။
၁၅။အလှကုန်များအတွက် Homogenizerပင်မလေဟာနယ် homogenizer စက်ရှိ လျှပ်စစ်အပူပေးရန်အတွက် နှစ်ထပ် အပူချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊
16. အချောထည်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်ခြင်းအတွက် သယ်ဆောင်ခြင်းပန့်အဖြစ်လည်း homogenizer ကိုသုံးနိုင်သည်။ပေးပို့ပစ္စည်းအတွက် လွှဲပြောင်းစုပ်စက်တစ်ခု သိမ်းဆည်းပါ။
17. homogenizer ၏အတွင်းပိုင်းစက်မှုတံဆိပ်အအေးပေးစနစ်သည် တစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်းကိုအချိန်ပိုကြာစေသည်။
18. ပုံသေ လှော်တက်(ss316) နှင့် နံရံခြစ်ရာ (အစားအစာအဆင့် ပစ္စည်း) ရောစပ်စနစ်။
19. Homogenizer For Cosmetics တွင် homogenizer 1-6000RPM နှင့် agitator 1-65RPM အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်း ရှိသည်။
20. လွယ်ကူသော သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ရေနံ ဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းသည့် ကိရိယာ ဒီဇိုင်း။
၂၁။Homogenizer Mixerသင်္ဘောသုံးစင်းအတွက် အပူနှင့်အအေးအတွက် နှစ်ထပ်အကျီဒီဇိုင်း။
22. လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက် မော်ဂျူလာဒီဇိုင်း။
၂၃။Homogenizer Mixersupport adjustment wheel design ပါရှိပြီး အဆင့်ကို ချိန်ညှိရန် လွယ်ကူသည်။စက်ပစ္စည်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပါ။
24. PLC ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် စက်လည်ပတ်ရန် လွယ်ကူစေပြီး အလိုအလျောက် လုပ်ငန်းစဉ် အပြည့်အစုံကို ပြုလုပ်ပေးသည်။
25. စိတ်ပူစရာမရှိသော အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် မူရင်းတင်သွင်းသောအမှတ်တံဆိပ်ပေးသွင်းသူများ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ။
၂၆။Homogenizer MixerGMP စံနှုန်းဖြင့် အမြန်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ပိုက်များ။Eary တပ်ဆင်ရန် စက်နှင့် သန့်ရှင်းရေးစနစ်။
ရောစပ်ခြင်း- ဖျော်ရည်များ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်များ၊ ဆပ်ပြာများ၊ ဖျော်ရည်များ အာရုံစိုက်ခြင်း၊ ဒိန်ချဉ်၊ အချိုပွဲများ၊ ရောစပ်ထားသော နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ မှင်များ၊ သွားကြွေလွှာများ။
ပျံ့နှံ့မှု ရောစပ်ခြင်း- မီသိုင်းဆဲလ်လူလိုစကို ပျော်ဝင်ခြင်း၊ ကော်လွိုင်ကိုယ်ထည် ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ကာဗိုက်များ ပျော်ဝင်ခြင်း၊ ဆီ-ရေ emulsification၊ အကြိုရောစပ်ခြင်း၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှု ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ အိုးမဲ၊ ဆား၊ အလူမီနာ၊ ပိုးသတ်ဆေး။
ပျံ့နှံ့မှု- ဆိုင်းထိန်းမှု၊ ဆေးပြားအပေါ်ယံပိုင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပေါ်လီမာပြုလုပ်ခြင်း၊ အလွှာပြန့်ပွားမှု၊ နှုတ်ခမ်းနီ၊ ဟင်းရွက်ဟင်းချို၊ မုန်ညင်းအရောအနှော၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်း၊ matting အေးဂျင့်၊ သတ္တု၊ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်း၊ ပြုပြင်ထားသော ကတ္တရာ၊
Emulsion- ဆေး emulsion၊ Mayonnaise မုန်ညင်းဆီ၊ နှင်းခရင်မ်၊ မျက်နှာဖုံး၊ မျက်နှာခရင်မ်၊ emulsion အနှစ်သာရ၊ ဆီ-ရေ emulsion၊ emulsion ကတ္တရာ၊ အစေး emulsion၊ ဖယောင်း emulsion၊ ရေအခြေခံ polyurethane emulsion၊ ပိုးသတ်ဆေး။
တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း- ဆေးဝါး emulsion၊ ဆီမွှေး၊ ခရင်မ်၊ မျက်နှာဖုံး၊ ခရင်မ်၊ တစ်ရှူးများကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖျော်ရည်၊ ပုံနှိပ်မင်၊ ယို။
2. ပမာဏ : 100L မှ 500L အထိ။
3. မော်တော်အမှတ်တံဆိပ် : ABB ။Siemens ရွေးချယ်မှု။
4. အပူပေးနည်းလမ်း- လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းနှင့် ရေနွေးငွေ့အပူပေးခြင်း ရွေးချယ်မှု။
5. ထိန်းချုပ်မှုစနစ် plc ထိတွေ့မျက်နှာပြင်။သော့အောက်ခြေ။
6. ပုံသေအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းခြင်း အမျိုးအစား သို့မဟုတ် အမှုန်အမွှား ရုတ်သိမ်းခြင်း။
7. အမျိုးမျိုးသော လှော်တက်ဒီဇိုင်းများသည် ကွာခြားချက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
8. သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တောင်းဆိုချက်အရ SIP ကို ​​ရရှိနိုင်ပါသည်။
ယခင်- ရိုးရိုး အလှကုန် ရောစပ်စက်
နောက်တစ်ခု: အပေါ်ပိုင်း Homogeneous motor|Cosmetic Emulsifier ဖြင့် လေဟာနယ် ရောစပ်စက်
အလွန်မြန်နှုန်းမြင့်သော ဖုန်စုပ်စက် homogenizer ...